Wararka - Sida wanaagsan ee loo maareynayo warshadaha wax soo saarka CNC
Warshadaha wax lagu farsameeyo CNC wixii ka dambeeya 2019, shirkadaha inbadan iyo ka badanba waxay dareemayaan inay yaraanayaan amarada suuqa. Sida loo maareeyo warshadaha wax soo saarka CNC waxay noqotay mowduuc ay ka walaacsan yihiin ganacsato badan. Teknolojiyada makiinadaha Wally waxay ka shaqeynaysay sanadaha badan warshadaha wax soo saarka ee CNC, waxayna sidoo kale la kulantay dhibaato noocaas ah. Maxaan sameyn doonaa
Guud ahaan, warshadaha wax soo saarka CNC waxay iska leeyihiin warshadaha wax soo saarka aasaasiga ah. Aragtida dadka xun, waxay noqon kartaa wax soosaarka heerka ugu hooseeya. Indhaha rajo-qabayaasha, waa warshad wax soo saar aasaasi ah oo aad u wanaagsan. Ma jiro xadka nolosha suuqyada ee alaabooyinka, mana jiro farqi u dhexeeya xilli-xilli-ciyaareedka iyo xilliga ugu sarreeya.
Si aad ugu noolaato sifiican warshadaha waxsoosaarka CNC, waxa ugu muhiimsan waa tayo. Tayada waa inay noqotaa halbawlaha horumarka ganacsiga. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha warshadaha qalabka ayaa ku adag inay soo saaraan shirkado tayo sare leh oo wax soo saara CNC. Sababta aasaasiga ah ayaa ah in tayada wax soo saarku aysan ahayn mid heer sare ah, taas oo si ba'an u saameysa isu imaatinka iyo gaarsiinta macaamiisha. Dhinaca kale, waxay ku hawlan tahay farsamaynta CNC Dhamaadka kale, waa macaamiisha aan heli karin matoorrada CNC oo tayo sare leh.
Sida shaqo wanaagsan loogu sameeyo tayada wax soo saarka, ugu horreyntii, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa heerarka, oo aan si fiican u dhaqan galino heerarka la dejiyey. Inta lagu guda jiro nidaamka hirgelinta, waa inaysan jirin qiimo dhimis, sida jaangooyooyinka sawirada, heerarka hawlgalka, heerarka kormeerka, iwm. Xiriiriye kasta oo badeecada ka soo baxa alaabta ceyriinka ah illaa rarka si adag ayaa loo xakameeyaa loona fuliyaa iyadoo loo eegayo heerarka, si loo sameeyo qaab wanaagsan jawiga dhaqanka shirkadaha, tayada ayaa ka sii fiicnaan doonta oo ka sii fiicnaan doonta Waa inuu jiraa suuq.
Qorshaha ganacsiga ee 2019, tiknoolajiyada mashiinka mashiinka Volley wuxuu qorsheynayaa inuu soo bandhigo qalab heer sare ah oo Japan ah oo ka baaraandegidda qalabka dib u habeynta mar labaad, iyadoo si weyn loo ballaarinayo awoodda wax soo saar iyo u adeegista macaamiisha cusub iyo kuwii hore.